Eny amin’ny Novotel convention Ivandry indray izy ireo nanomboka omaly, mikarakara ilay “Salon des études Internationales” andiany faha-11, efa nahafantarana azy ireo hatramin’izay. Tranoheva manodidina ny 18 isa ahitana ireo sekoly ambony avy atsy amin’ny Nosy rahavavy Maorisy, Etazonia, Canada , Inde…. no mandray anjara amin’izany, manana tanjona hanohana ireo tanora manam-piniavana mba hananan’izy ireny ho avy azo antoka sy mamiratra. Misy amin’ireo oniversite izay mandray anjara koa anefa no fantatra fa manana fiaraha-miasa amin’ireo sekoly ambony any ivelany koa na eto an-tanindrazana ihany aza no manohy ny fianarany ny tanora iray dia manan-kery ary manan-danja mitovy amin’ireo omen’ny fianarana any ivelany ny diplaoma azony. Anio zoma moa no hifarana amim-pomba ofisialy izany ka tanora an’arivony no ezahina hahazo tombontsoa. Amin’ny ankapobeny moa dia ny hanohy fianarana any Frantsa sy Etazonia no tena mahaliana ireo tanora Malagasy. Samy hafa ny vola omanina sy ilaina amin’izany miankina amin’ilay firenena safidiana.